Purba Sandesh	१८ आश्विन २०७८, सोमबार	395 Views
उनको मनमा बिद्रोह रहेछ, क्रान्तिको चेत रहेछ । परिवर्तनको राप र ताप रहेछ । अग्रगमनको आव्हान रहेछ । राज्यसत्ता परिवर्तन गर्ने हुँकार रहेछ । अनि न्याय र अधिकारको बिगुल रहेछ । आप्नै देशको एक मुठ्ठी माटोको याचना रहेछ । आफ्नै आङ ढाक्ने एक सर्को आकासको सपना रहेछ । धर्ती पनि गुमाएका, आकास पनि गुमाएका भुटानबाट बिस्थापन गराइएर धर्ती र आकास खोज्दै नेपालका सरणार्थी शिविरमा आफ्नै स्वत्वको खोजीमा मुर्मुरिरहेका आवाजहरुको मनभरी राँको पनि रहेछ ।
मैले स्नातक तहको अंग्रेजी कक्षामा पढाउँदै गर्दा हरपल मुस्कुराइरहने एक जना विद्यार्थी सधैं मेरो नजरमा हुन्थे । उनको मुस्कान प्राकृतिक थियो, मौलिक थियो । गृहकार्य सधैं जसो हुन्थ्यो र विद्यार्थीले पढेर कक्षामा प्रस्तुत गरिरहँदा उनी मुसुक्क मुस्कुराएर भन्थे, ‘लेखेको छ, सर । तर मैलाई चित्त बुझेको छैन ।’ अनि कक्षामा गृहकार्य ल्याएको छ भने पहिला उनै भन्थे । मैले सोच्थें, यी भाइ निकै फुर्सदिला रहेछन् क्यारे । कसै कसैले त भ्याइएन पनि भन्थे । तर दिल भूटानीलाई भ्याइएन भन्न कहिल्यै आएन ।
एउटा अध्ययनशील विद्यार्थी पाउँदा म फुरुक्क नहुने कुरै पनि थिएन ।
तिनै दिल भूटानी विद्यार्थी भाई आज एउटा काब्यको ग्रन्थ नै तयार पारेर ल्याई मेरो हातमा थमाइरहँदा मैले तीन दशक लामो विद्यार्थीको मनोविज्ञान बुझेको भन्ने भ्रम पनि सिद्धियो । ती मुस्कुराइरहने भाइ त बिद्रोहको ज्वाला मनभरी बोकेर पनि मुस्कुराइरहेका हुँदारहेछन् । उनको मनमा बिद्रोह रहेछ, क्रान्तिको चेत रहेछ । परिवर्तनको राप र ताप रहेछ । अग्रगमनको आव्हान रहेछ । राज्यसत्ता परिवर्तन गर्ने हुँकार रहेछ । अनि न्याय र अधिकारको बिगुल रहेछ । आप्नै देशको एक मुठ्ठी माटोको याचना रहेछ । आफ्नै आङ ढाक्ने एक सर्को आकासको सपना रहेछ । धर्ती पनि गुमाएका, आकास पनि गुमाएका भुटानबाट बिस्थापन गराइएर धर्ती र आकास खोज्दै नेपालका सरणार्थी शिविरमा आफ्नै स्वत्वको खोजीमा मुर्मुरिरहेका आवाजहरुको मनभरी राँको पनि रहेछ ।
यस्ता सायौं राँकाहरु मनभरी बोकेर दमक बहुमुखी क्याम्पसको स्नातक तहको कक्षामा मुस्कुराएर बस्ने विद्यार्थी भाइ दिल भूटानीको हृयको आयाम अहिले म नाप्ने प्रयास गरिरहेको छु । कति मजबुत रहेछ उनको चेतना ! आँसुहरुमा पनि मुस्कुराउन सक्ने ! अँध्यारामा पनि उज्यालो देख्ने । काँडामा पनि सुवास देख्ने । हजारौं घाउहरु बेकेर पनि एैया नभन्ने । आत्था नभन्ने । दुख्यो नभन्ने । बरु तिनलाई दवाएर उज्यालो छर्ने । नकारात्मकतालाई परास्त गरेर सकारात्मकताको बीउ छर्ने उनको यो महान व्यक्तित्व उनको भखैरै प्रकाशित भएकाकविता सङ्ग्रहनब्बेका घाउहरू(२०७८) मा प्रकट हुन पुग्यो । उनको मुस्कनमा यति धेरै घाउहरु थिएछन्, अहिले मात्रै थाहा भयो । अकल्पनीय यथार्थ !
उनको यस कविता सङ्ग्रहमा जम्मा ३६ वटा कविताहरु सङ्ग्रहित छन् । यी सबै अभिव्यञ्जनाहरुको रचना गर्भ भने एउटै छ, र त्यो हो भूटानी राज्यसत्ताले चलाएको आतङ्क र आप्mनै नागरिकहरुलाई देश निकाला गर्ने आततायी भूटानी राज्य संयन्त्र । अनि जसको परिणामस्वरुप तिनले देश छोडनु प¥यो । धर्ती पनि गुमाउनु प¥यो, आकास पनि गुमाउनु प¥यो । अन्ततः आप्mनो सारा इतिहास, बिरासत र पहिचान गुमाउनु पर्याे ।
यो कविता सङ्ग्रह वास्तवमा दिल भूटानीको आत्मबृतान्त हो भन्दा पनि अत्युक्ति हुँदैन । किनभने उनको पहिलो कविता म जन्मँदा को पहिलो श्लोकमै उनको जीवन लीलाको सुरुआती आयामको द्योतक बनेको छः
मुस्कुराउनु पर्ने मेरी आमाको चेहरा
अँध्यारो थियो ।(म जन्मँदा)
भुटानमा जन्मिएर बाल्यकालमै आप्mेनोपन गुमाउन पुगेका लाखौं सरणार्थीहरुको सामुहिक कथा हो यो । दिलले सानैमा सरणर्थी जीवन भोग्नु प¥यो । गाईबस्तु कोचेर लगेजसरी आप्mनै राज्यले लगेका बबुराहरुको भीडमा सानो मान्छे दिल भूटानी आज ती दिनहरुको बहीखाता पल्टाएर आएका छन् पाठकसामू । यो हिसावकिताव खाता हो, बही खाता हो, र एउटा जीवन्त इतिहास पनि हो ।
यसरी नेपालका बगर र जङ्गलमा छाप्रा बनाएर छानाबाट चुहिएका पानी थोपा कान र नाकमा, सिरकका खोलमा, आँखामा तपतप झरिरहँदा पनि मुस्कुराएर कक्षामा बस्ने दिल भूटानी आज तिनै पानीका थोपामा आप्mनोपन देख्दैछन् । तिनै पानीका थोपामा लेख्दैछन् काव्यमा एक इतिहास । र उनी हामी यता छौं मा भन्छन्ः
हामी दुखै दुखमा छौं
देश पर्खिरहेका छौं ।
उनले आफेनो भोगाइलाई अत्यन्तै मार्मिक अलंकारमा अभिव्यक्त गरेका छन् । यो अलंकार चानचुने पनि होइन । दिनहुँ हजारौं मानिस शिविरका मान्छे हेर्न भनेर जान्थे । अहिले पनि जान्छन् । मान्छे हेर्न मान्छे जान्छन् त ? कति पीडा हुन्छ मान्छे हेर्न मान्छे पैसा खर्च गरेर जान्छ भन्दा ? उनी म हरिण हुँ मा यसोसम्म भन्न भ्याउँछन् ः
चिडियाखानामा छु ।
उनमा क्रान्तिकारी चेतना प्रश्स्तै छ । त्यसैले उनले कहिले अक्टोवर क्रान्तिको बिम्ब छर्छन्, कहिले प्रान्सेली राज्यक्रान्तिको कुरा उठाउँछन् । उनका पर्चाहरु क्रान्ति गरिहेका छन् ।
सरणार्थी शिविरमा आगलागी भएर उनका कविताहरु डढेर गए, अनि उनी त्यही खरानीको बास्ना लिएर अरु काव्यकोृ रचना गरिरहेका छन् । खरानीमा जीवन पाउन्, खरानीमा अस्थित्व पाउने उनी र उनको सिर्जना इजिप्सियनहरुको पौराणिक पात्र फिनिक्स चरो हो । फिनिक्स आफ्नै खरानीमा जीवन पाउने पात्र हो । दिल भाइका रचना पनि त्यही चरो हो, र त आज यहाँ हामीमाझ यी कविताहरु झुल्किन पाए फिनिक्स चरो भएर ।
स्वत्व हराएका पात्र बनेका ती शरणार्थीहरु हामी, हामी रहेनौं भन्छन् ।
यस कविता सङ्ग्रहमा सरणार्थीहरुको कहालीलाग्दो जीवन त छ नै, अझ बढी त यसमा मानवीयताको क्षयीकरण गरिएकोमा छ । निर्दयी, पापी, निरंकुश शासकको भण्डाफोर गर्न खोजिएको छ यहाँ । अचेल म बिग्रिएको छु मा उनी भन्छन्ः
एक शताब्दी बूढो सिंह पुर्ने
एउटा चिहान खन्दै छु ।
यस सङग्रहमा डायस्पोराको निकै महसुस गर्न सकिन्छ । त्यहाँ नोष्टाल्जिया छ । जन्मभूमिको सम्झना छ । प्रेम छ । र आज पनि त्यहाँका डाडापाखा, खाृेला र बारीका कान्लाले पनि दिमागलाई जकड्याएर राखिरहेको छ । हजुरबाहरु मा उनी भन्छन्ः
जहाँ जहाँ पुगे पनि
बारबार छोट्टाचिराङ्ग सम्झिन्छन् ।
यसरी भाइ दिल भूटानीले देश छाडेर हिंडन बाध्य पारिएका, हिंडाइएकाहको जीवन्त चित्र कविताका हरफहरुमा उतारेका छन् । आप्mनो पहिलो कविता कृतिमै यति बिध्न बुलन्द आवाज दिन सक्ने कवि दिल भूटानीको लेखनमा शक्ति छ । कला छ । रङ्ग छ । अनि अनेक आयाम छ । र थुप्रै सम्भावना छ । अर्थात म उनको अक्षरहरुमा उनको भविष्य पढिरहेको छु । निकै सम्भावना बोकेका छन् । र बधाई पनि दिन चाहन्छु भाइलाई । मुस्कुराउन नछोड्नू । त्यो मुस्कान नै तिम्रो अकल्पनीय काव्य हो ।